ဒူဒူကြီး: Control Valves (၁၀) - Control Valve Actuators and Positioners
Control Valves (၁၀) - Control Valve Actuators and Positioners
control valves နဲ့ actuators တွေမှာ၊ friction နဲ့ differential pressure effect တွေ ရှိနေပေမယ့်၊ stronger springs တွေနဲ့ higher control pressure တွေကိုပြောင်းလဲ အသုံးမပြုပဲ၊ positioners တွေကိုသာ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Basic pneumatic positioner fitted to actuator pillars
Pneumatic positioner - positioner ကို၊ actuator ရဲ့ yoke သို့မဟုတ် pillars ပေါါမှာ ထိုင်ထား ပါတယ်။ valve position ကို ဖော်ပြနိုင်ရန်၊ feedback arm နဲ့ actuator ရဲ့ spindle တို့ကို ချိတ်ဆက် ထားပြီး၊ positioner သို့ higher-pressure air supply ပေးသွင်းဖို့၊ လိုအပ်ပါတယ်။ positioner ဟာ valve position ကို၊ input pneumatic signal အဖြစ်လက်ခံရယူပြီး၊ actuator အတွင်းကို output pneumatic pressure ပေးသွင်းကာ၊ valve ရဲ့ ရွှေ့လျှားမှု မှန်ကန်စေဖို့၊ ချိန်ညှိပေးပါတယ်။
reverse acting actuator နဲ့ direct acting valve တို့ကိုတွဲဆက်ထားတဲ့၊ 'air-to-open' control valve တလုံးမှာ၊ closing force လို့ခေါါတဲ့ အောက်မှ တွန်းနေတဲ့ differential pressure ရဲ့ tending force အပြင်၊ actuator အတွင်းမှ feed air pressure လည်း သက်ရောက်နေတဲ့အတွက်၊ spring range ဟာ တိုးသထက်၊ တိုးလာပါတယ်။ positioner နဲ့ တွဲဖက်တတ်ဆင်လိုက်တဲ့အခါ၊ feed air pressure ကို လိုအပ်သလို ချိန်ညှိပြီး၊ positioner ရဲ့ output pneumatic pressure အနေနဲ့ diaphragm သို့ပေးသွင်း နိုင်တဲ့အတွက်၊ friction နဲ့ hysteresis effects တို့၊ လျှော့ကျသွားပါတယ်။ "PN5400 - series" actuator တလုံးနဲ့ "DN50" အရွယ်အစား (၂ ") valve တလုံးကို တွဲဖက်ထားတဲ့၊ 'air-to-open' control valve arrangement ကို ဥပမာ အနေနဲ့ဖော်ပြပါဦးမယ်။
Fig. Positioner asasignal amplifier
manufacturer’s valve/ actuator selection chart အရ၊ "PN5400 - series" မှ၊ PN5420 actuator ရဲ့ spring range ဟာ၊ (0.2~ 1.0bar) ရှိပြီး၊ maximum allowable differential pressure ကတော့ (3.0 bar) ရှိပါတယ်။ PN5426 actuator ရဲ့ spring range ဟာ၊ (1.0~ 2.0bar) ရှိပြီး၊ maximum allowable differential pressure ကတော့ (13.3bar) ရှိပါတယ်။ (1.0~ 2.0bar) range ရှိတဲ့ spring တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ actuator အတွင်းကို၊ (0.2~ 1.0bar) ပမာဏရှိတဲ့၊ signal air pressure ပေးသွင်းတဲ့အခါ၊ spring ကိုတွန်းနိုင်ဖို့ force မလုံလောက်သလို၊ spring ရဲ့ full operating range အတွင်းမှာ၊ control မလုပ်နိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ positioner မှ၊ amplifier အနေနဲ့ control signal ကို၊ modulate ဖြစ်စေပြီး၊ supply air pressure အနေနဲ့ actuator အတွင်းသို့၊ ပေးသွင်း မှသာ၊ valve ဟာ၊ process အတွက်လိုအပ်တဲ့ အနီးစပ်ဆုံး appropriate position ဖြင့်ရွှေ့လျှားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (50 %) valve lift အတွက်၊ actuator မှ၊ ပုံမှန် control signal အနေနဲ့ (0.6 bar) သာရရှိနိုင်ပေမယ့်၊ positioner မှ (1.5bar) ခန့်အထိ၊ amplified ပြုလုပ်ကာ၊ ပေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ၊ control valve ရွှေ့လျှားသွားပါတေ့ာတယ်။
Fig. Pneumatic servo-mechanism (or) valve positioner
Fig. Typical motion-balance positioner
အပေါါမှာ motion-balance positioner တလုံးရဲ့ အခြေခံတည်ဆောက်ပုံကို၊ ဖော်ပြထားပါတယ်။ actuator spindle နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ positioner ရဲ့ feedback arm ဟာ၊ valve spindle ရွှေ့လျှားမှုပေါါ မူတည်ပြီး၊ bellow နဲ့ pneumatic relay တို့ကို၊ activated ဖြစ်စေပါတယ်။ positioner ရဲ့ pneumatic relay ကို၊ pilot valve အဖြစ်လည်း၊ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ controller မှ air control signal ဟာ၊ low pressure air အနေနဲ့ positioner အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်သလို၊ positioner အတွင်းမှ pneumatic relay ကတော့၊ amplifier သို့မဟုတ် booster အဖြစ် အလုပ်လုပ် ပါတယ်။ pneumatic amplifier ဟာ positioner အတွင်းသို့ ပေးသွင်းထားတဲ့၊ higher-pressure air supply ကို၊ bellow နဲ့ feedback arm တို့မှတဆင့်၊ လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲကာ၊ higher pressure air signal အနေနဲ့၊ actuator သို့ပြန်လည်ပေးသွင်းပါတယ်။
positioners တွေဟာ၊ proportional devices တွေဖြစ်ပြီး၊ proportional controllers တွေလို အလုပ်လုပ် သလို၊ "offset" လည်း ပါဝင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ ပုံမှန်သုံးလေ့ရှိတဲ့ typical positioner တလုံးရဲ့ proportional band ဟာ (3 ~6%) ကြားမှာရှိပြီး၊ sensitivity ကိုလိုအပ်သလို၊ adjusted လုပ်ကာ၊ ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ positioner ဟာ control system မှ၊ signal input pressure နဲ့ control valve ရဲ့ position တို့ကို၊ 'linear relationship' အနေနဲ့ တိကျစွာရှိနေစေဖို့၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ valve differential pressure ပြောင်းလဲခြင်း၊ stem friction ဖြစ်ပေါါခြင်းနဲ့ diaphragm hysteresis ပေါါပေါက်ခြင်း၊ အစရှိတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ positioner မှ actuator သို့ input signal ပေးသွင်းခြင်းဖြင့် control valve ရဲ့ movement position ကို၊ တည်ငြိမ်နေစေဖို့ ထိမ်းပေးထား ပါတယ်။
pneumatic positioners တွေကို၊ "P to P" positioners တွေအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ control system မှ puneumatic signal (P) ကို၊ input signal အဖြစ်လက်ခံရယူပြီး၊ resultant pneumatic signal (P) ကို၊ output signal အဖြစ် ထုတ်ပေးကာ၊ acturator ကို၊ ရွှေ့လျှားစေတဲ့အတွက်၊ "P to P" positioners တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးအန္တရာယ်များတဲ့ dangerous atmosphere မှာ၊ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု risk of explosion မဖြစ်ပေါါနိုင်တဲ့အတွက်၊ pneumatic positioners တွေကို၊ intrinsically safe အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ high differential pressure မှာ၊ large amount of force အနေနဲ့အားများများသုံးပြီး၊ valve ကို 'ပိတ်' စေနိုင်ပေမယ့်၊ process system မှ၊ အခြား electronic equipments တွေနဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ limitation အဖြစ် အကန့်အသတ်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Electro-pneumatic converters - positioners တွေကို၊ electro-pneumatic converters တွေ နဲ့လည်း၊ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ converter အတွင်းသို့ air supply ပေးသွင်းထားပြီး၊ control valve ရဲ့ spindle နဲ့ converter ရဲ့ feed back arm ကိုချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ valve movement ကြောင့် feed back arm ရွှေ့လျှားပြီး၊ arm ရွှေ့လျှားမှုမှ တဆင့် (4 ~ 20 mA) electrical current ကို၊ input signal အဖြစ်၊ converter အတွင်းသို့ ပေးသွင်းပါတယ်။
Fig. Typical electro-pneumatic converter/ regulator
converter ဟာ၊ input electrical signal အနည်းအများပေါါမူတည်ပြီး၊ air supply ကိုလိုအပ် သလို၊ ပြောင်းလဲကာ၊ positioner သို့ input air signal အဖြစ် ပြန်လည်ပေးသွင်းပါတယ်။ electro-pneumatic converters တွေကို၊ 'I to P' converters တွေလို့လည်းခေါါပါတယ်။ electrical signal မှ pneumatic signal သို့ပြောင်းလဲပေးတဲ့အတွက်၊ 'I to P' converters တွေလို့ခေါါတာ ဖြစ်သလို၊ hazardous area ရဲ့ အပြင်ဖက်နေရာတွေနဲ့၊ excessive ambient temperatures ရှိတဲ့ area ရဲ့ အပြင်ဖက်နေရာတွေမှာ၊ converters တွေကို တတ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. I to P converter and P to P positioner
positioners တွေကိုတတ်ဆင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့၊ တိကျတဲ့ accurate valve positioning အနေနဲ့၊ process ကို control လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ positioner မှ higher pressure နဲ့ greater air flow ကို ရနိုင်တဲ့အတွက်၊ control valve ရဲ့ response လည်း၊ ပိုမြန်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ differential pressure အမြဲပြောင်းလဲနေလေ့ရှိတဲ့ process တွေမှာ၊ fluid flow ဟာလည်း၊ အမြဲတမ်း လိုက်ပါပြောင်းလဲနေပြီး၊ valve movement မှာ plug position ပါပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အတွက်၊ positioners တွေကိုတတ်ဆင်ကာ၊ ထိမ်းသိမ်းကြပါတယ်။ non-linear actuators တွေကို၊ linearised ဖြစ်စေဖို့ positioner နဲ့တွဲဖက် တတ်ဆင်ပြီး၊ အသုံးပြုကြသလို၊ control valves တွေမှာ လက်မခံနိုင်တဲ့၊ unacceptable hysteresis တွေပေါါပေါက် တတ်တဲ့အတွက်၊ positioners တွေကိုတတ်ဆင်ပြီး၊ control လုပ်ကြပါတယ်။ control valves တွေရဲ့ packing နဲ့ sealing arrangements တွေကြောင့်၊ fractions တွေဖြစ်ပေါါပြီး၊ fraction ကြောင့် control valve movement မှာ၊ hysteresis တွေပေါါပေါက် ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Typical application of valve field-diagnostics equipment
positioner ကို zero setting မှာချိန်ညှိထားဖို့လိုပါတယ်။ zero position မှာရှိနေတဲ့အခါ၊ spring force ကိုပြန်တွန်းမယ့် pressure လည်း မရှိတော့ပဲ၊ valve plug ဟာ seat အပေါါမှာ၊ ထိုင်နေမှာဖြစ်သလို၊ control valve မှာလည်း full differential pressure ကို၊ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ I to P converter နဲ့တွဲဖက်တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ positioners တွေကို၊ တိကျမှုရှိစေဖို့ calibration အနေနဲ့ ပုံမှန်ချိန်ညှိ စစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်။ "ANSI -75.25.01-2000, Test Procedure for Control Valve Response Measurement for Step Inputs" ဆိုပြီး၊ calibration လုပ်ရာမှာလိုက်နာရမယ့်၊ အချက်အလက်တွေကို၊ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အချို့ positioners တွေဟာ၊ sensors မှတဆင့် input signal ကိုလက်ခံရယူပြီး၊ basic controllers တွေကဲ့သို့၊ အလုပ်လုပ်တာ၊ တွေ့ရမှာဖြစ်သလို၊ "Self-actuation control valves" တွေကို၊ ရေးသားတဲ့အခါ၊ ဆက်လက်ဖော်ပြပါဦးမယ်။
sensors တော်တော်များများဟာ၊ analogue outputs တွေဖြစ်တဲ့ (4 ~ 20 mA) current signal သို့မဟုတ် (0 - 10 V) voltage signal ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ analogue outputs တွေကို၊ digital form အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ "A/ D converters" တွေကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ analogue-to-digital (A / D) conversion ပြောင်းလဲခြင်းကို၊ sensors တွေကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက် လာကြပြီး၊ digital output အနေနဲ့ ထုတ်ပေးတာကို၊ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
digital sensors တွေကို၊ 'HART®,' 'Fieldbus', နဲ့ 'Profibus' အစရှိတဲ့ communications protocols တွေလို၊ digital communications systems တွေနဲ့၊ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီး၊ long distance အနေနဲ့ အဝေးမှာရှိနေတဲ့ controllers တွေထံ၊ အချက်အလက် data တွေကို၊ ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ analogue control systems တွေမှာ၊ cabling သွယ်သန်းမှုနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ အတွက်၊ အနီးအနား short distances အကွာအဝေးတွေ အတွက်သာ အသုံးပြုဖို့၊ သင့်လျှော်ပါတယ်။ analogue signal ကို အသုံးပြုတဲ့ controllers တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ၊ digital system တွေမှာ၊ electrical interference လည်းနည်းသွား ပါတယ်။ နည်းပညာတွေ၊ တိုးတက်လာတာနဲ့  အမျှ၊ process မှာ digital positioners တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
Digital positioner - SMART positioner လို့ခေါါတဲ့၊ digital positioners တွေဟာ၊ valve position ကို၊ monitor လုပ်ပြီး၊ ဖော်ပြရုံသာမက၊ အချက်အလက် data တွေကို၊ digital form အနေနဲ့ ပေးပို့ ပါတယ်။ digital form အနေနဲ့ရရှိလာတဲ့ data တွေကို၊ process control system မှာ၊ centralized monitoring အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင်၊ digital positioners တွေကို တတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်၊ process မှာ 'On-line digital diagnostics' ကိုပါ၊ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Digital positioner
digital positioners တွေဟာ၊ analogue type positioners တွေလောက်၊ supply air ပေးသွင်းဖို့ မလိုအပ်သလို၊ setting-up နဲ့ calibration ကိုလည်း၊ auto equipment ကို၊ process မှ ဖြုတ်ထုတ် စရာမလိုပဲ၊ stroking routine အတွင်း၊ အလွယ်တကူဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
Rotary pneumatic actuators and positioners - ball valves နဲ့ butterfly valves တွေလို၊ rotary action valves တွေကို၊ ရွှေ့လျှားစေဖို့ rotary pneumatic actuators နဲ့ positioners တွေ ကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ rotary pneumatic actuators တွေဟာ၊ piston type actuators တွေဖြစ်ပြီး၊ central shaft, piston (၂) လုံးနဲ့ central chamber တို့ပါဝင်ပြီး၊ casing တခုတည်း အတွင်းမှာ တတ်ဆင် ထားပါတယ်။ pistons နဲ့ shaft တို့ကို၊ rack အပေါါမှာထိုင်ထားပြီး၊ pinion drive system နဲ့ ရွှေ့လျှားစေ ပါတယ်။
Fig. Spring return rotary pneumatic actuator
pneumatic controller မှ၊ ပေးသွင်း တဲ့ feed air pressure ဟာ၊ central chamber အတွင်း ဝင်ရောက်လာပြီး၊ pistons တွေကို outwards အနေနဲ့ အပြင်ဖက်သို့တွန်းထုတ်ပါတယ်။ pistons တွေရွှေ့လျှားသွားတဲ့အခါ၊ rack နဲ့ pinion arrangement တို့ကြောင့်၊ pinion လည်ပတ်ပြီး၊ pinion နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ control valve ရဲ့ shaft လည်းလိုက်ပါ၊ လည်ပတ်ပါတယ်။ supply air pressure မရှိတော့တဲ့အခါ၊ return springs တွေရဲ့ force ကြောင့်၊ shaft ဟာ opposite direction movement နဲ့ ပြန်လည်၊ လည်ပတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Diaphragm type rotary actuator
rotary pneumatic actuators တွေကို၊ double acting actuators တွေအဖြစ်လည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ rotary double acting actuators တွေမှာ၊ return springs တွေတတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပဲ၊ diaphragm သာ တတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်၊ diaphragm type rotary actuator အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ pneumatic controller မှ၊ ပေးသွင်း တဲ့ feed air pressure ကို၊ piston ရဲ့ တဖက်မှ၊ ပေးသွင်းခြင်းဖြင့်၊ shaft ကို လည်ပတ်စေပါတယ်။
pneumatic actuators တွေ နဲ့ positioners တွေဟာ၊ လေကို အသုံးပြုတဲ့အတွက်၊ လုံလောက်တဲ့ adequate compressed air supply system တတ်ဆင်ဖို့၊ လိုအပ်တဲ့အပြင်၊ air supply ဟာ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့ပြီး၊ pressure အနေနဲ့ မှန်ကန်တိကျဖို့လိုပါတယ်။ pneumatic instrumentation တွေဖြစ်တဲ့၊ controllers, I to P convertors နဲ့ positioners အစရှိတဲ့ equipment တိုင်းရဲ့ final supply connection တွေမှာ၊ individual coalescing filter တွေနဲ့ regulator units တွေကို တတ်ဆင်ခြင်းဖြင့်၊ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့ကာ၊ pressure မှန်ကန်တဲ့၊ air supply ပေးသွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Electrical actuators - pneumatic supply မရရှိနိုင်တဲ့၊ နေရာတွေမှာတော့၊ electrical actuators တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။ electrical actuators တွေမှာ၊ electric motor ကို တတ်ဆင်ထားပြီး၊ 230 Vac, 110 Vac, 24 Vac နဲ့ 24 Vdc အစရှိတဲ့၊ supply voltage တွေပေးသွင်း ရပါတယ်။ VMD (Valve Motor Drive) and Modulating electrical actuators တွေ ကို၊ VMD လို့ခေါါတဲ့ valve motor drive type နဲ့ modulating type ဆိုပြီး၊ တွေ့ရပါတယ်။
Fig. Valve motor drive actuator system
valve motor drive actuators တွေဟာ၊ driving the valve open, driving the valve closed နဲ့ no movement ဆိုတဲ့၊ state အခြေအနေ၊ အနေအထား (၃) မျိုးနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ VMD actuators တွေ၊ လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ forward and reverse travel အဖြစ်၊ လည်ပတ်တဲ့အတွက်၊ ball valves နဲ့ butterfly valves တွေလို၊ rotary action valves တွေကို၊ ရွှေ့လျှားစေဖို့၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ linear valve ဖြစ်တဲ့၊ globe vales တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာတော့၊ gear mechanism arrangement တွေကို၊ actuator body အတွင်းမှာတတ်ဆင်ပြီး၊ motor ရဲ့ rotary movement ကို၊ linear movement အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ၊ အသုံးပြုပါတယ်။ electric motor ကို၊ ဘယ်လည်၊ ညာလည် forward and reverse travel အနေနဲ့ လည်ပတ်စေဖို့၊ external 3-position သို့မဟုတ် 2-position switch units တွေကို တတ်ဆင်အသုံးပြုကြသလို၊ relays တွေကိုလည်း၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Electrical actuator
control valve ရွှေ့လျှားစဉ်၊၊ over-travel ကြေင့်၊ motor မပျက်စီးစေဖို့ actuators တွေမှာ limiting device ကို တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ limiting device ဟာ maximum motor torque switch ဖြစ်နိုင် သလို၊ position limit switch လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ control valve ရွှေ့လျှားရာမှာ၊ interrupting ဖြစ်ပေါါတာနဲ့၊ motor ရဲ့ power supply ကို၊ limiting device မှ တဆင့် ဖြတ်တောက်လိုက်မှာ၊ ဖြစ်ပါတယ်။ torque switches ကို၊ valve seat အပေါါမှာ၊ ထိုင်စေမယ့် defined closing force နဲ့ ချိန်ညှိကာ တတ်ဆင်ထားပြီး၊ over-travel ကြောင့် valve stem seizure မဖြစ်စေဖို့၊ တားဆီးပေးပါတယ်။ position limit switches တွေကတော့ လိုအပ်သလို၊ adjusted လုပ်ကာရွှေ့ပြောင်း နိုင်တဲ့အတွက်၊ application မှာ over-sized valve အနေနဲ့၊ control valve ကိုတတ်ဆင်ထားခဲ့လျှင်၊ valve stroke ကို လိုအပ်သလို၊ limit လုပ်ကာ၊ ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ electrical actuators တွေမှာ၊ torque switch နဲ့ position limit switch (၂) မျိုး စလုံးကို၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိသလို၊ တခါတရံမှာ position limit switch (၁) မျိုးတည်းကိုသာ၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
position limit switch (၁) မျိုးတည်းကိုသာ၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ control valves တွေမှာ၊ tight valve shut-off ကို၊ ရစေဖို့ spring-loaded coupling နဲ့ position limit switch ကို တွဲဖက် တတ်ဆင်ကြ ပါတယ်။ valve position feedback ကိုလည်းတတ်ဆင်ထားလေ့ရှိသလို၊ valve motor drive actuators တွေကို၊ on/ off actuation နဲ့ modulating control applications တွေ မှာ တတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Integral positioning circuit for modulating electric actuator
process ရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ၊ control valve ဟာ၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ၊ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ applications တွေမှာ၊ modulating actuators တွေကို တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ modulating type electrical actuators တွေအတွင်းမှာ၊ တနာရီမှာ အကြိမ်အရည်အတွက် (၁, ၂၀၀) ခန့်အထိ ရပ်လိုက်မောင်းလိုက် start/ stop လုပ်နိုင်တဲ့၊ higher rated motors တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ actuators တွေရဲ့ အပြင်ဖက်မှာတော့၊ positioning circuits တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ actuator ရဲ့ limit switches တွေကြား၊ control valve spindle ရွှေ့လျှားစေဖို့၊ controller မှ actuator သို့ပေးသွင်းတဲ့၊ 230 Vac, 110 Vac, 24 Vac နဲ့ 24 Vdc အစရှိတဲ့၊ control signal တွေဟာ၊ positioning circuit မှ၊ analogue signal ဖြစ်တဲ့၊ (4 ~ 20 mA) current signal သို့မဟုတ် (0 - 10 V) voltage signal ကို၊ interprets အနေနဲ့ အနှောက်အယှက်၊ ပေးနိုင်ပါတယ်။ interprets ကို ရှောင်လွှဲ နိုင်ဖို့၊ potentiometer လို၊ position sensors တွေကို၊ integral positioning circuit အဖြစ်၊ actuator အတွင်းမှာ တတ်ဆင်ကာ၊ feed back signal အနေနဲ့ controller သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီး၊ actual valve position ကို၊ control လုပ်ပါတယ်။
Fig. Typical manufacturer’s electric actuator selection chart
pneumatic actuators တွေမှာ၊ air supply သို့မဟုတ် control signal fail ဖြစ်သွားတဲ့အခါ၊ control valve ကို၊ အပိတ် သို့မဟုတ် အပွင့် အနေအထားသို့၊ ချက်ခြင်းပြောင်းလဲရောက်ရှိ သွားစေမယ့်၊ inherent fail-safe features တွေတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ electrical actuators တွေမှာလည်း၊ power သို့မဟုတ် control signal fail ဖြစ်သွားတဲ့အခါ၊ process ရဲ့ လိုအပ်ချက် အရ၊ control valve ကို၊ အပိတ် သို့မဟုတ် အပွင့် အနေအထားသို့၊ ချက်ခြင်းပြောင်းလဲရောက်ရှိစေမယ့်၊ 'spring reserve' arrangements တွေကို၊ inherent fail-safe features တွေ အဖြစ်၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ spring reserve versions ကြောင့်၊ electrical actuators တွေရဲ့ force ဟာ၊ အကန့်အသတ် limited ရှိပါတယ်။ limited ရှိတဲ့အတွက် actuators တွေရဲ့ valve movement ဟာ၊4seconds / mm နှုံးထက်နိမ့်တဲ့ speed နဲ့ သာရွှေ့လျှား နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ electrical actuators တွေကို၊ တတ်ဆင်တဲ့အခါ၊ control valve မှာပေါါပေါက် လာမယ့်၊ maximum differential pressure အပေါါအခြေခံကာ၊ ရွေးချယ်ကြပြီး၊ manufacturer’s electric actuator selection chart တခုကို၊ နမူနာအနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Reference and image credit to : Control Valve Actuators and Positioners - ကိုထွန်း, Steam Engineering Tutorials, Automatic Process Control, Addison-Wesley, W. A. Hadley and G. Longobardo, 2003, http://www.isa.org/, http://www.equilibar.com/, http://www.industrial-electronics.com/, http://www.emersonprocessxperts.com/, http://www.chem.info/, http://www.indiamart.com/, http://www.a-tcontrols.com/, http://www.engineerlive.com/
Posted by ဒူဒူကြီး at 06:55